Nutrition – Page7– Healthy Life Journal
ကလေး ထမင်းအစားနည်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ . . .
မေး ။ ကလေးက အသက်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လပါ။ ထမင်းအစားနည်းလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကလေးထမင်း စားဝင်အောင် ဘယ်လိုအားဆေးတိုက်ရမလဲ။ ဒေါ်နွယ်၊ သမိုင်း။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ကလေး အသက်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လမှာ...
မျိုးအောင်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသော အစားအသောက်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ သားသား၊ မီးမီး လိုချင်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအနေနဲ့ အောက်ပါ အစားအသောက်တွေက မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတာကြောင့် သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ – ပြဒါးဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော ငါး ပြဒါးဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတဲ့ အကောင်ကြီး ငါးမျိုးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ...
အစာကို ကြေညက်အောင် ဝါးစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
အစာစာတိုင်းကြေညက်တဲ့အထိ ကြိတ်ဝါးပြီး စားသောက်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုကြိတ်ဝါးစားသောက်တာကြောင့် အဓိကအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးသုံးရပ်ကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ (၁) နံပါတ်တစ်ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက အာဟာရဓာတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်က ပိုမိုစုပ်ယူရရှိနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်က အစားအသောက်စားသောက်တဲ့နှုန်းကို လျော့နည်းစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အစာစားတာ နှေးလေလေ၊ အစာကို နည်းနည်းပဲ...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဝမှဗိုက်ပူတာ မဟုတ်ဘဲ တချို့လူတွေ ပိန်နေပါလျက် ဗိုက်ပူနေတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်ပူတာက အဝတ်အစားဝတ်ရင် စမတ်မကျစေရုံသာမက ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်ပူတာ လျော့ကျစေဖို့ အဆီများတဲ့ အစာနဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင် ဝမ်းဗိုက်အဆီကို...
စိတ်ဝေဒနာရှင် ကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုစားသောက်သင့်သလဲ . . .
မေး. ကျွန်မအဒေါ်က စိတ်ကျန်းမာရေး ဝေဒနာရှိသူပါ။ ဆရာဝန်နဲ့လည်း မှန်မှန်ပြပါတယ်။ စိတ်ရောဂါရှိသူတွေ ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်ရင် ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုသင့်တော်ပါသလဲ။ မြမြသင်း၊ အင်းစိန် ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကျန်းမာဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် (Healthy Eating)...
တစ်နေ့ အယ်လ်မွန်သစ်စေ့ လေးစေ့စားရုံနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) Almond သစ်စေ့ဆိုတာ အခွံမာတဲ့ အစေ့အဆန်တစ်မျိုးပါ။ အရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစာဖြစ်ပြီး ဗီတာမင်နဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အယ်လ်မွန်သစ်စေ့ လေးစေ့စားပေးရုံနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမှာပါ။ – သွေးတွင်းကိုလက်စထရော လျော့ကျစေပါတယ်...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မျှစ်ချဉ်က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သလား မေး. မျှစ်ချဉ်စားရင် ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်ပါသလားရှင့်။ ကျွန်မက မျှစ်ချဉ်ကိုအရမ်းကြိုက်လို့ပါ။ ဖြေ. မျှစ်ချဉ်စားရင် လူငယ်တွေအများစုအတွက်ကတော့ သင့်တော်ပါတယ်။ မျှစ်ချဉ်မှာ အမျှင်ဓာတ် (Insoluble Fiber) ပါဝင်တဲ့အတွက် ဝမ်းမှန်မှန်သွားစေပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဂေါ့ဖ်(ွသူ်)ရိုက်တာက သန်စွမ်းမှု၊ ပျော့ပျောင်းမှု၊ နည်းလမ်းကျမှုနဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဂိမ်းကစားနည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါ့ဖ်ရိုက်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က လုံလုံလောက်လောက် အလုပ်လုပ်ဖြစ်စေဖို့ အစားအသောက်လိုအပ်သလို ကြွက်သားတွေစိုပြည်စေဖို့ အရည်လည်း အပြည့်အဝလိုအပ်ပါတယ်။ ကြွက်သားနဲ့ နာ့ဗ်ကြောတွေတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့...
ရာသီအကူးအပြောင်းကာလ အဖြစ်များသည့် အအေးမိဝေဒနာအတွက် အာဟာရ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရာသီအကူးအပြောင်းကာလမှာ ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ အအေးမိဝေဒနာကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ရာအတွက် စားသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး အစာတွေနဲ့ ရှောင်သင့်တဲ့အစာတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ – ကြက်စွပ်ပြုတ် ကြက်စွပ်ပြုတ်ပူပူလေးကို သောက်တာကြောင့် Cysteine ဓာတ်ရရှိစေကာ ပါးလွှာတဲ့ အချွဲမြှေးတွေကို...
ဂျူးဖူး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ချိုမြပြီး ကြက်သွန်နီလို အနံ့မျိုးရှိတဲ့ ဂျူးဖူးကို အသားတွေကြော်ရာမှာ ရောထည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဂျူးဖူးအရသာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အတွက် ဂျူးဖူးမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ – ကယ်လိုရီပါဝင်မှု အလွန်လျော့နည်းပါတယ် လတ်ဆတ်စိမ်းစိုတဲ့ ဂျူးဖူး ၁၀ဝဂရမ်မှာ...